top 5 Waxyaabaha la sameeyo On A Short Booqo Si Luxembourg | Save A tareenka
Home > safarka Europe > top 5 Waxyaabaha la sameeyo On A Short Booqo Si Luxembourg
Luxembourg City waa isku darka sixir ah ee qadiimiga ah iyo casriga ah oo ay weheliso maxaliga ah iyo kuwa caalamiga, halleeyo lillaahinimada iyo raaxada. Waa ammaan in la yidhaahdo in la kuwan oo dhan fursadaha dhowba, waxaa jira fursad ah ma waxaad ka heli lahaa caajiso. Taasi waa sababta ay ahayd adag tahay inaanu kala magacaabo oo keliya top 5 wax ay sameeyaan booqasho gaaban in Luxembourg. laakiin, waxaan ku siin doonaa go a!
1. taariikhda, Art & Dhaqanka
magaaladan waxaa loo jecel yahay bixisaa boorish xiiso taariikhda, dhaqanka, fanka iyo dabiiciga ah Bbc. Iyada oo dad badan oo ka mid ah xafiisyada Midowga Yurub iyo waaxaha marti in Luxembourg City, waxaa jira a aragti dhaqamada dhab ah in magaaladan.
Iyada oo bandhigyo ay tiro badan iyo matxafyada, Daar wayn oo qalcad, Luxembourg isku daraa ah kala duwan oo cajiib ah meelaha dhaqameed oo xiiso leh. Dhaqanka iyo farshaxanka ee Luxembourg waa mid muujisa dhabta ah ee ay dadka, kala duwan iyo dhaqamada. Luxembourg laga yaabaa kibirka hawlaha ay dunida oo dhan u gaar ah dhaqanka ka tahay kala duwan iyo dhaqanka si shows iyo ciidaha. Si inay ka sameeyaan fudud si aad u ogaado Fanka iyo Suugaanta ee Luxembourg, Luxembourg dalxiiska abuuray Luxembourg Card: free helaan in ka badan 60 meelaha dhaqanka ee Luxembourg iyo gobolka Greater.
Iyada oo qayb ka ah Top 5 wax ay sameeyaan booqasho gaaban in Luxembourg, hubaal waa in aad soo booqato L kaCity Museum etzebuerg. matxafka waxaa lagu haynayaa afar dhisme taariikhi ah. Bandhiga joogto ah "The Luxembourg Story" muujinayaa taariikhda ka badan kun sano ee caasimadda ah ee Duchy Grand ah. in walxaha badan asalka Next, bandhiga bandhigaysaa horumarinta magaalada isticmaalaya taxane ah oo lagu daydo magaalooyinka. bandhigyo meel gaar ah waxaa si joogto ah la qabtaa laba heerarka kale ee matxafka. Hubi in la si aad u hubiso soo baxay waxa ay yihiin marka aad booqato!
Casemates du Bock waa kuwo si fudud loo heli qalcaddii hore ee ay Dureeri Dhexdeeda, Montee de Clausen. Bock Casemates waa a 17 kilomitir tunnel dheer, markii hore ku xardhay dhagaxa ka soo baxa ay ku Isbaanish inta u dhaxaysa 1737 iyo 1746. casemates The lagu yaqaan ay muhiimadda taariikhiga ah ee Luxembourg, isagoo hoy u ah in ka badan 35,000 dadka deegaanka oo kun oo askari inta lagu guda jiro WWI iyo WWII. Oo ka kooban aayado Hawada iyo Sallaano dhagax weyn cajiib ah, tunnel taariikhiga ah ee Casemates waa a UNESCO World Heritage Site. Eedayn telefoonnadii kuwa iyo santuuq bac in. Tani waa a waa-arki on your Top 5 wax ay sameeyaan booqasho gaaban in Luxembourg!
Frankfurt inay Tareenadu Luxembourg
Amsterdam si Tareenadu Luxembourg
Rotterdam si Tareenadu Luxembourg
3. Heritage diinta ee Luxembourg
Kuwa xiiso dhaxal ahaan diinta waa inay booqdaan goobta cibaadaysiga Quirinus ah. A cibaadaysiga Xajka Gothic ka taagay in 1355 iyo qayb ahaan xabaal dhagax ka qodnayd. On ay goobta, asal ah waxaa jiray Asheeraah quruumaha oo dadka Roomana way dambe caabudeen sida meesha quduuska ah Christian hore. il dhagax weyn A halkan roobku. Dadka la Wadaajiyey Aaway awood Asagoo arigtadaa ka faa'iido u biyaheedu ay dhacdo nno isha.
Tan iyo qarnigii 11aad, goobta ayaa gooni uga dhigay inay Saint Quirin iyo tan iyo bilowgii 13aad, adeegyada la qabtay ee labada godadka goobta cibaadaysiga.
The cibaadaysiga Xajka Gothic la qotomiyey in 1355, halka saqafka iyo dawan-munaaradaha yar ayaa dabadeed ku daray, dhamaadka qarnigii 19aad.
Church St Michael waa kaniisadda ugu da'da weyn ee Luxembourg magaalada oo la burburiyey iyo dib dhowr jeer ka badan qarniyadii la soo dhaafay. Church Saint Michel ee waa mid ka mid ah dhismayaasha diinta ugu da'da weyn ee Luxembourg. dhismaha taariikhda Taariikhaha in ay dib ugu 1987 marka tirinta codadka ee Luxembourg taagay cibaadaysiga yar sababo uu qalcaddii gudahood. Kaniisadda la joogo isku daraa tolnimo ah Romanesque waxyaabaha dhismaha Gothic iyo qurxinta gudaha Baroque. Ogsoonow dedan oo aan wadno in macbudka. daaqadaha muraayada Large. Tiro ka mid ah farshaxan diinta. Iyo siday maleeyeen weyn ee rinjiyeynta Virgin ka iman Jaha meesha allabariga ku dul Baroque ah.
4. Qaraqmeen Grand-Ducal booqasho gaaban in Luxembourg
Haddii naqshadaha waa wax, ka dibna ku Qaraqmeen Grand-Ducal u baahan yahay inuu qayb ka mid ah Top noqon 5 wax ay sameeyaan booqasho gaaban in Luxembourg. Sida joogitaanka asalka ah ee Duke Grand iyo qoyska boqortooyada, Grand Ducal Palace ee Luxembourg City waa gabal cajiib ah naqshadaha, dhisay qarnigii 16aad lagu jiro Renaissance Vlaamse ah. design gudaha madaxtooyada ayaa u muuqda in isku darka ah fiican of noocyo kala duwan oo Hababka. xidhiidhka A jilicsan ee u dhexeeya taataabtay iyo style Dr Makumbe-Gothic, iyo naqshado iftiin warshadaha by Jarmal naqshadeeye warshadaha – Ingo Maurer.
5. Golaha Chocolate ee Luxembourg City
Chocolate The House ee Luxembourg loo yaqaan for shukulaatada dabcan. Laakiin ka sokow qaniinyada macaan iyo noocyo kala duwan oo ah moofo, Waxa kale oo aad ku raaxaysan karaan naan ay macaan iyo saladh. Marka Terrace waxaa ka buuxa, aad had iyo jeer gudaha fariisan karo dabaqa dhulka ama dabaqa sare.
Golaha Chocolate ku yaalo hore ee Ducal Grand ah Palace. Sidaas qaadato kursiga oo wuxuu ku raaxaysan Hotchocspoon a. Waxaan hubnaa inaad ka dhigi doonaa House Chocolate goobta aad ugu jeceshahay. ilaawi karin An, waayo-aragnimo sedaxaad, soo oogay oo dhan.
*Talo dheeraad ah:
Waayo lacag dheeraad ah oo xiiso leh, hana ka maqnaan Summer in Festival City ee. Waxay qaadataa meel ka dhamaadka June ilaa bilowgii September. Muddadan aad awoodid raaxaysan riwaayada free, suuqyada, bandhigyo iyo isboortiga dhacdooyinka magaalada oo dhan.
Tareen si ay Luxembourg isticmaalaya SaveATrain! Meesha ugu dhakhsaha badan uguna fudud inay jartaan adventures ku wareegsan Europe.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-things-short-visit-luxembourg%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Haddii aad rabto in aad noqon nooca in dadka isticmaala aad, si toos ah aad ku hanuunin karaa bogagga raadinta our. In link this, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside aad xiriir la leeyihiin bogag ku degtey Ingiriisi our, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa / TR in / ama / de iyo luuqado badan.